Kurota Kwenyoka Kuruma Mumwe Munhu Zvakare - Kurota Pamusoro
icloud yakawanda zvakadii pamwedzi
foni yakaiswa mukati asi kwete kuchaja iphone
bata sikirini foni isiri kushanda
Kurota kwenyoka kuruma mumwe munhu .
Kurota nyoka dzichiruma .Chero kurota kunorwisa mhuka kunge nyoka hakuzofadze. Kana zvakadaro, kana tikaona kuti inorova munhu watinoziva, sekurota nyoka ichiruma mumwe munhu. Tinotanga kufunga kuti zvinogona kutyisidzira kana kubva kumunhu iyeye, asi hazvisi.
Kurota uku hakuenderane nedudziro ye kurota nyoka . Izvi zvinoreva kuti matambudziko ane hukama nevanhu vepedyo ave kusvika. Ndiko kukurukurirana kana kushambadzira nevanhu vaunoda zvakanyanya.
Kana zvasvika pakuona nyoka kana nyoka ichirwisa munhu, izvi zvinoratidza kushaya simba mauri. Zvichienderana nekuti ndiani arwiswa, hutera uhwo hope dzinoda kukuratidza huchachinja.
Uku ndiko kurota kune vanhu vasina kuchengeteka uye vasina kuvimba. Ivo vanotya zvinhu zviri kuitika zvinogona kuvakanganisa uye havagone kugara murunyararo. Semuenzaniso, vanhu vanogara nezvikwereti ndomumwe wavo. Iko kutya kuti anogona kurasikirwa nebasa ravanaro kwakanakisa, uye anonzwa asina kukuvara.
Kana iwe uri mumwe wevanhu ivavo uye iwe wakambova nehope idzi, imhaka yekuti iwe unoda kuchinja iwo mamiriro, asi iwe hauzive maitiro ekuzviita. Kusabatsira ikoko ndiko kunopa hope.
Kurota nyoka ichiruma mudiwa
Kana tikazoona kuti hama kana munhu ane mukurumbira ari kurwiswa, kunyanya sevabereki vedu, sekuru kana sekuru. Kurota uku kunoratidza kuti unoda kuchengetedzwa kana kuperekedzwa. Ndizvozvo. Munguva pfupi yapfuura, unonzwa kusurukirwa uye kusadzivirirwa.
Iko kune kushaya simba mune pamoyo, uye haunzwe kukwanisa kusangana nematambudziko auri kusangana nawo. Kutsvaga munhu waunoona muhope kunokosha.
Kana ukasanzwa kusurukirwa kana kusanyura mumatambudziko akaoma. Kungoti kurota kwacho kunodudzirwa sekushushikana kwaunonzwa kuti chimwe chinhu chinoitika kumunhu iyeye.
Kurota nyoka inoruma mwanangu
Mukurota uku hazvina basa kuti une mwana here kana kuti hauna; kana iwe ukaona mwana ari mwana wako muhope, izvi zvinoratidza kutya kwaunonzwa kwekurasikirwa nezvinhu zvako zvakakosha kana budiriro. Ndokunge, iri kudzidzisa kutya kwako kurasikirwa nezvinhu zvako pachako.
Bvisa kutya ikoko nekuti kana zvisiri, haugone kushinga kuita zvinhu zvitsva kana kuwana zvimwe zvakakosha basa rako kana basa.
Ndinorota nyoka ichiruma mwana
Kana iwe ukaona kuti mwana asingazivikanwe zvachose ari kurwiswa, izvi zvinoreva kuti uri kutya kutanga mapurojekiti matsva, bhizinesi, kana basa rekuyunivhesiti. Iwe unonzwa kuti haugone kuzviita, kana kuti haukwanise kuzviita. Iwe unofanirwa kuziva kuti uku kunzwa kune zvakasikwa paunotanga chimwe chinhu chitsva. Ramba uchifunga kuti kana iwe uchiri kunetseka, iwe ucharamba uchirota hope idzi.
Kurota nyoka uri kure
Kana iwe ukarota nyoka iri kure newe ichi chiyeuchidzo chekuti muroti ave kuda kusangana nemunhu uyo, achizvishandura semunhu ane moyo wakanaka uye anofara, achamukuvadza zvakanyanya, saka zvakakosha kuti atore hanya nevanhu ivavo vaasingazive. Inguva yakaipa yekutanga hukama kana iwe usingazive iwo mumwe mweya zvachose.
Kurota uku kunogona zvakare kukwezvera matambudziko nematambudziko kuhupenyu hweanorara, sezvo kuri kuratidzwa kwezvipingamupinyi, kurwadziwa uye kukuvara zvinokusvika.
Kurota nyoka diki
Nyoka muzviroto, zvinoenderana nesaizi, inogona kuburitsa mhando dzakasiyana dzedudziro. Nyoka hombe kana nyoka zvine njodzi zvakanyanya, asi zvidiki zvinogona kuuya zvakare zvakatakurwa nerevo yakawanda yehupenyu hwemuroti.
Nyoka diki mukati mehope kuratidzwa kwezvipingamupinyi zvaunogona kusangana nazvo, asi zvakare iri nzira yekukuudza kuti ivo zvipingamupinyi uye matambudziko echinguvana , iyo iwe yaunogona kupfuura nyore uye kunakidzwa mushure meiyo mibairo.
Kurota nyoka pamba
Imba yako, kana imba iri mukati mezviroto zvako, ndizvo chaizvo zvinomiririrwa nekuziva kwako kweiyo mhuri yemhuri. Mhuri yako chimwe chinhu chakakosha, saka kuona nyoka mukati memba ichiwedzera kuti mhuri inorwa ichauya nekukurumidza nekuda kwechikonzero.
Kana iwe ukaona muhope dzako nyoka ichipinda mune yakachengeteka mukati memba yako ipapo kukakavara nekukakavara zvichave zvemari, kana iwe ukaiona iri padyo nemufananidzo wemhuri zvino zvichave nekuda kwe nhengo yemhuri inozoburitsa kunetsana kwemhuri . Iwe unofanirwa kuzvitarisira iwe neako uye ugadzikane kuitira kudzivirira mamiriro ezvinhu kubva mukuwedzera.
Paunorota nyoka mukati medziva
Kurota nyoka irimumvura mashura akashata. Mvura inowanzo kuve chirevo chehupenyu hwega uye hwemweya hweanorara; Huchenjeri hwake nemaonero aanoona zvinhu. Kana iwe ukarota yenyoka mumvura yedziva, gungwa kana chero chimwe chakafanana, saka izvi zvinoreva kuti muroti ane kunetseka muhupenyu hwake izvo zvinoita kuti anzwe zvakashata uye hazvimurege afare zvizere.
Iwe unofanirwa kuisa muchiono zvinhu zvinoitika muhupenyu hwako uye enda kumberi kana iwe uchida kugadzirisa.
Kurota nyoka inobhururuka
Zviuru zvemakore apfuura, nyoka dzaive mhuka dzakanaka, izvo kwete chete zvaisavhundutsa vanhu, asi zvaigona zvakare kusimuka nemumhepo zvakanyatsonaka kupfuura shiri chero ipi zvayo. Zvirinani ndizvo zvakakosha.
Mumaroto mweya unomiririra mazano nemifungo. Kana iwe ukaona nyoka inobhururuka pamusoro pemusoro wako saka uku kufungidzira kuti mazano asina kunyatsonaka ari kubatikana mupfungwa dzako. Izvi zvinogona kuonekwa nemazano ekutsiva, nzira dzekukuvadza vamwe uye kunyange zviitiko zvisiri pamutemo . Kana iwe uchida kuenda kumberi uye kuchengetedza chiremera chako uye hunhu, iwe zvirinani teerera kune izvi kuti ugone kudzivirira mamwe matambudziko.
Kurota nyoka mune hembe dzako
Kana nyoka dziri mukati mako, kana mukati mehembe dzako sezvazvingaite, zvinowedzera kuti hutano hwako hunokanganiswa. Nyoka dzinosanganisirawo kudzikira muhutano , uye mune iyo yekuve nayo mukati mehembe dzako iwe unofanirwa kutsvaga nzvimbo kwavanosiya kuti uone kwaunofanira kuisa pfungwa dzako.
Ukarota nyoka dzichibuda muvhu
Pasi mufananidzo wekurota webasa rinoitwa nemunhu akarara. Kana iwe ukaona kuti nyoka inotanga kukambaira ichibva muvhu ipapo unogona kuitora sezvisina basa kuti basa rako nebasa remaoko ako zvichapfuura nemumipingo nekuda kwesarudzo dzakaipa dzawakaita. Izvi hazvireve kuti zvichave zvekupedzisira, nekuti zvese zvinogona kugadziriswa , asi iwe unofanirwa kuita chikamu chako nekukasira.
Kurota uku kunoenderanawo nekuwanda kwenyoka
Huwandu muzviroto zvakawanda zvakakosha sekurota pachawo. Mukati meizvi huwandu hwenyoka hunogona kuratidza hwakawoma mugumo pane kana paine imwe chete.
Kurota kwenyoka dzinoverengeka
Kana iwe uchinge warota inosanganisira dzinoverengeka nyoka, ipapo iwe unogona kuve uri pamberi peakanyanya mashura. Kana mukati mehope idzi nyoka dzinoenda kwauri saka unenge uri panhanho apo matambudziko achapinda muhupenyu hwako kwete munzvimbo imwe chete, asi uchavawana vakaoma munzvimbo dzese dzehupenyu hwako.
Kana nyoka dzikasimuka kubva pauri zvinova chiratidzo chakanaka, nekuti zvinoreva kuti zvese zvakaipa zvingadai zvakaitika nhasi zvinotiza kubva kwauri, sezvo wakwira pamusoro pematambudziko nezvipingamupinyi uye wakunda.
Kana nyoka dzinoverengeka dzichikurwisa
Kurota nyoka dzichimira kuti dzikurume zvakaipa kumunhu akarara, sezvazviri inodaidzira matambudziko , kurwa, kudzingwa mabasa uye kunyange kusungwa. Kurota uku kunoreva kuti iye akarara achapfuura nemumatambudziko anotyisa muzuva rake zuva nezuva, kuti achapfuura nematambudziko ezvehupfumi, vaviri uye matambudziko ehutano asingamutenderi kuti atarise ziso husiku.
Kurota kwenyoka diki dzinoverengeka
Nyoka diki zvakare dzinoreva zvipingamupinyi zvishoma, saka kana akarara aine akati wandei aya muzviroto zvake izvi zvinongoreva kuti achawana zvipingamupinyi zvaachafanirwa kuyambuka muzuva rake zuva nezuva, munzvimbo dzakasiyana dzehupenyu hwake newe inogona kuvapfuura pasina dambudziko rakawanda , saka hapana kurwadziwa kwakanyanya kuhope uku.
Kana mukadzi akarota nyoka dzinoverengeka
Mukati mehope idzi tinotaura nezvehushamwari uye nevanhu vakatenderedza mukadzi; Kana akarota nyoka dzinoverengeka saka izvi zvinoreva kuti vanhu vakatenderedza mukadzi vari kumurongera nekumurongera kuti vamukuvadze. Iwe unofanirwa kubhadhara zvakanyanya kune shamwari dzako uye vadiwa kuti vadziviswe kubayiwa kumusana.
Kurota kwenyoka dzinoverengeka dzakamonerwa
Kurota uku kune zvakakonzeresa pahutano hweakarara. Kana iwe uine ichi chiroto izvi zvinoreva kuti muroti inogona kunge iri kuchengeta zvirwere izvo haazive. Zvakanakisa kuita ongororo yekurapa iyo inobvumidza kubvisa chero hutachiona hwakakomba uye nekudaro usave mukuru, nekuti kana nyoka dzikasunungura uye dzakamira izvi zvinoreva chimwe chinhu chakashata.
Rota kuti nyoka dzinodzorwa
Rudzi urwu rwehope haruwanzo, asi hazvireve kuti hazvigone kuitika. Iroto umo nyoka dzinodzorwa sekunge yaive iyo Pied Piper yaHamelin inotaura nezve iyo iyo muroti ine chivimbo chikuru uye kuti nekuda kweizvi matambudziko haamukanganise kana nepadiki; Sezvineiwo, munhu akarara anokwanisa zvekuti kana auya nedambudziko anoritenderedza pasi orishandura kuita bhenefiti.
Zvichienderana nezvinoitika mukati meroto
Izvo zvinoitika mukurota zvinotonyanya kukosha sezvinoonekwa, zvakare zvaunonzwa inogona kuve inonyanya kukosha pakududzira hope , saka iwe unofanirwa kubhadhara zvakanyanya kune izvi.
Kana imwe kana dzimwe nyoka dzichikuruma
Uku ndiko kududzirwa kunotsvakwa nevanhu vazhinji mukati mehope idzi. Kana iyo nyoka ikakuruma uye iwe uchinzwa kurwadziwa, kutya uye kupererwa, saka ichi chirevo chekuti munguva pfupi vanhu vakakukomberedza vachakukuvadza nekukubaya kumusana. Unogona kunge uine matambudziko neshamwari dzako , mhuri yako kana mukuru wako saka vamwe vachataura nezvako.
Kana pachinzvimbo iwe ukarota uchirumwa nenyoka, asi iwe uchinzwa kuti unozviita senzira yekutsvaga mushonga wehupfu uye hazvikunetsi zvachose saka izvi zvinoreva kuti iwe inogona kumira yakanangana nendimi dzakaipa , nekuti hapana chinogona kutaura pamusoro pako chiri chechokwadi uye hapana anogona kuzvitenda.
Zvinorevei Kurota NezveNyoka Mumba Mako?
Zvinorevei Kana Iwe Ukarota NezveLice?
Zvinorevei Kana Iwe Ukarota Nezve Nyuchi?
Zvinorevei Kana Iwe Ukarota Nezve Tupukanana?
Zvinorevei Kana Ukarota Nezve Nzou?
Zvinorevei kana iwe uchirota nezve mumwe munhu iwe…